Akọrọ ngwa agha osisi, Matching equipment, PC Equipment - Shantui
Njirimara 1.Mmetụta nzukọ na disassembly, agagharị dị elu nke mgbanwe, adaba na ngwa ngwa, na ọrụ zuru oke mmeghari saịtị. 2. kọmpat na ezi uche Ọdịdị, elu modularity imewe; 3. Ọrụ ahụ doro anya ma arụmọrụ ahụ kwụsiri ike. 4.Less ala, arụpụtaghị ihe; 5.The eletriki usoro na gas usoro na-onwem na elu-ọgwụgwụ na elu pụrụ ịdabere. Igwe ihe eji agwakọta agwugwo bu ihe eji emeputa ihe nke jikotara ihe eji echekwa ihe ...
Njirimara 1.Mmetụta nzukọ na disassembly, agagharị dị elu nke mgbanwe, adaba na ngwa ngwa, na ọrụ zuru oke mmeghari saịtị. 2. kọmpat na ezi uche Ọdịdị, elu modularity imewe; 3. Ọrụ ahụ doro anya ma arụmọrụ ahụ kwụsiri ike. 4.Less ala, arụpụtaghị ihe; 5.The eletriki usoro na gas usoro na-onwem na elu-ọgwụgwụ na elu pụrụ ịdabere. Nkọwapụta Ọnọdụ SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y Usoro iwu arụpụtara m³ / h 25 40 50 ...
Njirimara 1. Ntọala enweghị ntọala, enwere ike itinye akụrụngwa maka nrụpụta mgbe arụchara ọrụ ọrụ ma sie ike. Ọ bụghị naanị belata ụgwọ ntọala ntọala, kamakwa belata usoro nrụnye. Ihe eji eme ihe di iche iche nke ngwa ahia na eme ka odi ngwa ngwa ma wepu ya. 3. N'ozuzu kọmpat usoro, obere ala na-arụ. Nkọwapụta Ọnọdụ SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F The ...
Njirimara Osisi ahụ nwere usoro batching, usoro nha, usoro agwakọta, sistemụ njikwa ọkụ, sistemụ njikwa ikuku na wdg. Mkpokọta, ntụ ntụ, mmịba mmiri na mmiri nwere ike ibupụta ma jikọta ya na osisi. Ejiri agwakọta agwakọta agwakọta binyere site na onye na-ebu ibu n'ihu. A na-ebufe ntụ ntụ site na silo n'ime ntule site na ịghaga ebu .Water na mmiri mmiri mmako na-pumped si akpịrịkpa. Usoro niile dị nha bụ akpịrịkpa elektrọnik. The osisi bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka ...
Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd. bụ mbụ mmepụta nke ihe inggwakọta na njem ígwè nke nnukwu ala-ekesịpde isi ụlọ ọrụ, bụ CREC, CRC karịrị afọ emeri na onye òtù ọlụlụ, isi ihe inggwakọta osisi, korota inggwakọta osisi, akọrọ inggwakọta ngwa agha osisi, elu-ọgwụgwụ azụmahịa mbuaha osisi, towing mgbapụta, mkpofu ahịhịa na iche iche igwekota.
Ngwa nke sjhzs75-3e ihe agwakọta akụrụngwa maka ngwa ahịa ndị ahịa Myanmar
Construction oge: October 2020 Ngwa ubi (engineering ụdị): mepere emepe na-ewu Equipment ụdị: ihe inggwakọta akụrụngwa Ngwa: On October 9, 2020, mgbe ọtụtụ ụbọchị nke remote echichi na nduzi, Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E ihe inggwakọta akụrụngwa ihe ịga nke ọma .. .
Ngwa nke SjHZS90-3B Xixiayuan Water Conservancy Project
Oge owuwu: Septemba 2020 Ngwa ubi (ụdị injinia): ọrụ ugbo, oke ohia na nchekwa mmiri typedị akụrụngwa: ihe eji agwakọta SjHZS90-3B silo nke silo bụ nke ochie ndị ahịa. Ngwa ： Na Septemba 2020, abụọ SjHZS090-3B osisi batching nke Shantui J ...
Concrete agwakọta osisi SjHZS75-3E ọrụ ndị Myanmar ahịa
Shantui Janeoo mmiri ihe na-agwakọta SjHZS75-3E mezue nnukwu ọrụ nrụpụta na Ọktoba 9,2020. N'ime ọtụtụ ụbọchị nke nduzi dịpụrụ adịpụ, ọ na-emepe ụzọ iji mepụta uru maka ndị ahịa Myanmar. Emetụta ọnọdụ ọrịa ahụ, onye injinia na-ere ahịa mgbe ọ na-ere ahịa enweghị ike ịga ...
Shantui Janeoo na-enweta ahịa ahịa nke mba ofesi nke osisi ọkụkụ na igwekota igwekota
N'oge na-adịbeghị anya, e zigara Shantui Janeoo 2XSjHZS120-3B ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ na usoro 10 nke gwakọtara gwakọtara gwakọtara na square-square-mita 12 nke ọma na Philippines, na njem ọrụ nke inye aka oru ngo nke Metro Manila ga-amalite n'oge na-adịghị anya. N'ebe nnyefe ahụ, ndị otu emechara ...
Ọrụ Shantui Janeoo Shiheng Canggang okporo ụzọ iwu ụgbọ okporo ígwè
N'oge na-adịbeghị anya, e tinyewo usoro isii nke SjHZS240-3R nke Shantui Janeoo maka owuwu nke Shiheng-Canggang Intercity Railway ma nyefee ya ndị ahịa. Ngwa niile nakweere mpempe akwụkwọ nke siloji, na akụrụngwa ọ bụla nwere ...